ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး အတွင်း ပါဝင်သော လယ်ယာမြေများ အတွက် နစ်နာကြေး လျော်ကြေးငွေပေး? - Yangon Media Group
မလှိုင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာခရိုင် မလှိုင်မြို့နယ်တွင် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးအတွင်းပါဝင်သွားသော လယ်ယာမြေများအတွက် နစ်နာ ကြေးလျော်ကြေးငွေပေးအပ်ပွဲကို မလှိုင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှူးရုံးခန်း၌ ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီ ခွဲကကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါနစ်နာကြေးလျော် ကြေးငွေပေးအပ်ရာတွင် မလှိုင်မြို့ နယ် လမ်းနယ် ပေ ၄ဝဝ အတွင်း ပါဝင်သွားသော နတ်စဉ်ကုန်းအုပ်စုနှင့်မှရိုးအုပ်စုတို့မှ လယ်ယာမြေ နစ်နာသူများအား ပေးအပ်ခြင်းဖြစ် ပြီး နတ်စဉ်ကုန်းအုပ်စုအတွင်းမှ တောင်သူ ၃၆ ဦးပိုင်ဆိုင်သော ဦးပိုင်ပေါင်း ၃၆ ခုကွင်းပေါင်း ခုနစ်ကွင်းအတွင်းမှ လယ်မြေ ၁ ဒသမ ဝ၃ ဧကနှင့်ယာမြေ ၅၄ ဒသမ ၉၅ ဧက၊ စုစုပေါင်း ၅၅ ဒသမ ၉၈ ဧကအတွက် နစ်နာကြေးငွေ ကျပ် ၅၆၁၈၆ဝဝဝ ကိုလည်းကောင်း မှရိုးအုပ်စုအတွင်းမှ တောင်သူငါး ဦးပိုင်ဆိုင်သော ဦးပိုင်ခြောက်ခု ကွင်းပေါင်းနှစ်ကွင်းမှ ယာမြေ ၃ ဒသမ ၄၇ ဧကအတွက် နစ်နာ ကြေးငွေ ကျပ် ၃၄၇ဝဝဝဝ ကို လည်းကောင်းအသီးသီးပေးအပ်ခဲ့သည်။
ယင်းပေးအပ်ပွဲသို့ မလှိုင်မြို့ နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်သီတာငြိမ်းနှင့် NLD ပါတီဝင်များ၊ မြို့နယ်အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှူး ဦးငွေဒိုးနှင့်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ လယ်ယာမြေဆုံးရှုံးခဲ့သော ဒေသခံတောင်သူ များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး လယ်တစ် ဧကလျှင်ငွေကျပ် ၁၂ သိန်းနှုန်းနှင့် ယာတစ်ဧက ငွေကျပ် ၁ဝ သိန်းနှုန်း ဖြင့် စုစုပေါင်းတောင်သူ ၄၁ ဦးအ တွက် ဦးပိုင်ပေါင်း ၄၂ ခုကွင်း ပေါင်းကိုးကွင်းမှ လယ်ယာမြေစုစု ပေါင်း ၅၉ ဒသမ ၄၅ ဧကအတွက် စုစုပေါင်းနစ်နာကြေးငွေကျပ် ၅၉၆- ၅၆ဝဝဝ အားပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လစာကို ထုတ်မပေးဘဲ ထိန်းသိမ်း??